Version 0.7.1 – Tareen Release xajiya, rogid
January 31, 2011 by dalabyo 9 Comments
Tareen Release xajiya, rogid
Work on transposh waxaa la bilaabin xawaare buuxa, iyo markii version cusub gaareyso dowlad deggan aan isku dayo lagu sii daayo si ay tacsida u isticmaalka guud. Tani version yar ma keeno wax qaababka cusub oo weyn, laakiin waxa la aado si uu u xaliyo qaar dhibcood in loo baahan yahay fiiro.
Sidaas oo aan ugu buuqaysaan oo dheeraad ah, yaynaan dib u eego isbedelada:
Laba turjumaadaha af inay plugin ayaa lagu daray, Dutch oo gargaar ka Roland Nieuwendijk iyo Ruushka oo gargaar ka Romans Matusevics. Haddii aad rabto in aad caawin, kaliya nala soo xiriir oo naga heshaa mahad weligeed ah (iyo credits)
Calaamadaynta ee qaybo ayaa go'an for posts tp_language
Si weyn loo yareeyo tirada weydiimo database on URLs translatable (ka kun ka mid ah)
Dayactir loogu translation si toos ah markii turjumaad qarsoodi aan la taageeray on matoorada google aan
Buddypress Fix (waxaana rajeynayaa in kale) redirections on hawlaha pages hal iyo bogaga kale ee lagu wareejiyey double
Dayactir ah ee ku lumiyey leh ka dib markii translation boostada iyo turjumi dhan
Waxaan rajaynaynaa inaad doontaa raaxaysan version this, oo waxaan sugeynaa comments aad iyo feedback.
Filed Under: Messages General, Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: turjumaad ugu deeqday, yaryar, sii daayo, uqaadineed xawaaraha
Good si ay u arkaan shaqada weyn sii wadi! Just su'aal deg deg ah, Ma arrimaha la riixo gzip of pages turjumo ama kaliya habka php aan isticmaalayay?
Anigu garan maayo wixii ku saabsan arrimaha la gzipping iyo plugin, falalka plugin caadi ahaan dhici hor gzipping meel ka qaadataan
waxaa laga yaabaa in dhibaato waxba waan ogahay, sidaa darteed haddii aad soo saari karaa, abuuraan tigidh ah ee trac kaliya.
Waxaan la isticmaalayo version transposh 0.6.6 , hadda waxaan doonayaa in la gaarsiiyo in version this. Sidaas sida aan sameyn karo? oo aanu u saamayn on database.
Waxaan jeclaan plugins si badan. Laakiin dhibaato weyn waa waxa sababa server load sare, iyo goobaha aan laga joojiyay on bixiyayaasha marti badan. In version this, i arki “Si weyn loo yareeyo tirada weydiimo database on URLs translatable (ka kun ka mid ah)” oo waxaan rajeynayaa in ay tahay run ah.
Waxaad si toos ah uga interface WordPress kor karo, ama ay soo saarida version cusub on top mid ka weyn.
Waxaan qabaa in la yareeyo SQL codsan doonaa in aad site sida aad isticmaalayso turjumaad url si xoogan.
Nasiib wacan, oo anna taas waan kaaga mahad celinayaa haddii aad waayo-aragnimada la version cusub nala wadaagaan
Waxaan qiimaynta fur-in loo adeegsado website kooxdeyda iyo ilaa iyo haatan waxaan ahay dhicin waxa ay samayn karaan… shaqo weyn!
Waxaan su'aal ka qabto (kuwaas oo laga yaabaa inay tahay codsi ka muuqatay). Tani ma meel sax ah si ay u wada xiriiraan si aad u? Well, halkan waxaa anyways tagaa:
Ma jiraa hab aan xadayn karo bandhigay ee post a ka mid ah oo kaliya luqada? Tusaale ahaan, Waxaan doonayaa in aan boostada maqaal ku saabsan dhacdo in Brazil, kaliya ee Portuguese, akhristeyaasha aan Brazil. Ma doonayo in ay u turjumay luqad kale. Ma suurto gal?
Markaasuu, hal su'aal dheeraad ah: Waxaan doonayaa in lagu daro qaar ka mid ah astaanta warbaahinta bulshada (facebook | twitter | LinkedIn, iwm), oo link u dhiganta bogagga turjumay. Ma jiraa si aan u astaysto URLs kuwa luqad kasta oo?
Thanks ka hor tahay caawimada, iyo sii shaqada aad u fiican.
Thanks for bogaadin ku, hadda su'aalaha
1. Waxaa jira duubo ah fasalka diyaar u ah in ay “only_thislanguage” taas oo ka dhigi doonaa qayb tuso kaliya luqad siiyo, laga yaabaa inaad ku dari kartaa code la mid ah Meta u maaraysay tp_language ee hadda ka jirta posts kaasoo u ogolaanaya posts in la duudduubay by fasalka iyo darteed samayn rajeeyay sida aad
2. waxaad isticmaali kartaa shayga my_transposh_plugin caalami ah oo afka dhexdiisa si ay u gaaraan wax ka beddelid yiri, dadka u isticmaali mararka qaar in uu soo bandhigo images kala duwan ee luqadaha kala duwan
Tan iyo WP 3.1 sii daayo anigu mar dambe edit karaa turjumaadda: sida aan loo hubiyo checkbox ee luqad (in), aan webste on my page luqaddooda soo laabtay (Faransiis). Fikrad kasta oo arrintan ku saabsan?
Eric "Rico" sheegay
Hello, Aad ayaad u mahadsantahay for aad plugin Transposh, waxa ay u muuqataa inay si fiican u shaqeeyaan (WordPress 3.0.5) on my site. turjumaad degdeg ah; ma uu furmo suuqa cusub in la furo “google ama wax kale” sida in, aad xal u yahay “aan la arki karin”. iyo Xulashada “Auto ogaado afka u users” Waa wax ku ool ah ! mahadsanid
Version Tani waa ka fiican. Iska yaree server load sare u xuub-. Anyways, mararka qaarkood, my site waa qalad la xidhiidha database.